CSV Explorer: Na-arụ ọrụ na nnukwu CSV faịlụ | Martech Zone
CSV faịlụ bụ ntọala na ọ bụkarịkarị denominator nke mbubata na mbupụ data sitere na sistemụ ọ bụla. Anyị na onye ahịa na-arụ ọrụ ugbu a nwere nnukwu nchekwa data nke kọntaktị (ihe karịrị nde 5 nde) ma anyị kwesịrị ịza, jụọ, na mbupụ ngalaba nke data ahụ.
Gịnị bụ CSV Njikwa?
A ụkpụrụ dị iche iche rikoma faịlị bụ faịlụ ederede doro anya nke na-eji kọma iji kewaa ụkpụrụ. Ahịrị ọ bụla nke faịlụ ahụ bụ ndekọ data. Ihe ndekọ ọ bụla nwere otu ubi ma ọ bụ karịa, nkewapụrụ site na commas. Ojiji nke rikoma dị ka onye na-ekewapụta ubi bụ isi mmalite nke aha maka usoro faịlụ a.
Ngwaọrụ Desktọpụ dịka Microsoft Excel na Google Sheets nwere mgbochi data.
Microsoft Excel ga - ebubata usoro data nwere ihe ruru nde 1 na ogidi na - akparaghị ókè n'ime mpempe akwụkwọ. Ọ bụrụ n’ịnwale ibubata karịa nke ahụ, Excel na-egosi ịdọ aka na ntị na-ekwu na agbanweela data gị.
Nọmba Apple ga-ebubata usoro data nwere ihe ruru nde 1 na ahịrị 1,000 na mpempe akwụkwọ. Ọ bụrụ n’ịnwale ibubata karịa nke ahụ, Ọnụ Ọgụgụ na-egosi njikere nke na-ekwu na agbanweela data gị.
Okwute Google ga-ebubata usoro data nwere ihe dị ka mkpụrụ ndụ 400,000, nke nwere oke 256 kọlụm kwa mpempe akwụkwọ, ruo 250 MB.
Yabụ, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na nnukwu faịlụ, ị ga-ebubata data ahụ na nchekwa data kama. Nke ahụ chọrọ usoro nchekwa data yana ngwa ọrụ na-ajụ ike ịkewaa data. Ọ bụrụ n’ịchọghị ịmụ asụsụ na-ajụ ajụjụ ma ebe ikpo okwu ọhụụ… enwere usoro ọzọ!
Ihe nchọgharị CSV
Ihe nchọgharị CSV bụ ngwa dị n'ịntanetị dị mfe nke na-enyere gị aka ibubata, nyocha, nkewa, na mbupụ data. Versiondị nweere onwe gị na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na ahịrị mbụ nde 5 ruo nwa oge. Versionsdị ndị ọzọ na-enye gị ohere ịchekwa usoro data nke ihe ruru nde 20 nke ị nwere ike iji rụọ ọrụ.
Enwere m ike ịbubata ihe karịrị nde 5 nde taa taa n'ime nkeji ole na ole, jụọ data ahụ n'ụzọ dị mfe, ma bupụ ndekọ m chọrọ. Ngwaọrụ ahụ rụrụ ọrụ n'enweghị ntụpọ!
Atụmatụ CSV Explorer
Nnukwu (ma ọ bụ Nhazi oge) Data - Ahịrị ole na ole ma ọ bụ nde ahịrị ole na ole, CSV Explorer na-eme ka mmeghe na nyochaa nnukwu faịlụ CSV ngwa ngwa ma dịkwa mfe.
Na-ahazi - CSV Explorer dị mfe iji. N'iji aka ole na ole, nyocha, chọọ, ma mepụta data iji chọta agịga n'ime ahịhịa ma ọ bụ iji nweta nnukwu foto.
Export - CSV Explorer na - enyere gị aka ịjụ ma bupụ faịlụ - ọbụlagodi ị na - ekekọta faịlị ahụ site na ọnụ ọgụgụ ndekọ ịchọrọ na nke ọ bụla
Jiri anya gị hụ ma jikọọ - Kpata data, chekwaa eserese maka ngosi, ma ọ bụ bufee nsonaazụ ya na Excel maka nyocha ọzọ.
Bido na CSV Explorer
Tags: rikoma iche ụkpụrụCSVonye nyocha csvdataexcelOkwute Googlennukwu data